मर्जरमा जान तयार हुने बैंकको संख्या २३ पुग्यो, चिन्नुहोस् कुन–कुन हुन् ?
काठमाडौं : मर्जरका लागि प्रतिवद्धता जनाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्न थालेको छ । यसैबीच, २० वटा वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरका लागि प्रतिवद्धता सहितको पत्र केन्द्रीय बैंकमा पठाएका छन् । यस्तै, ३ वटा विकास बैंकले पनि केन्द्रीय बैंक सामु मर्जरका लागि प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
तर, सरकारी लगानीका ३ र अन्य ५ वाणिज्य बैंक भने मौन बसेका छन् । यी बैंकहरुले अहिलेसम्म मर्जर सम्बन्धी कुनै जानकारी केन्द्रीय बैंकमा दिएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएरै मर्जरमा जान निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि मर्जरका लागि प्रतिवद्धता जनाउने बैंकहरुको संख्या बढेको हो ।
यस्तै, पछिल्लो समय सार्वजनिक रुपमै बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजाने घोषणा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले गर्दै आएका छन् । उनले मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलन कार्यक्रममा पनि राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति बैंकहरुले मान्नुपर्ने बताएका थिए ।
यता, केन्द्रीय बैंकले लिएको मर्जर नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले ऐक्यवद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर, मर्जरमा जाने बैंकलाई सहुलियत दिनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् । यो मागलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले समेट्ने देखिएको छ ।
लाभांश सिजन : ६२ कम्पनीले गरे घोषणा, साधारण सभा पनि धमाधम